မြစ်အတွက် နေရာပေးပါ – “တာတွေရဲ့ ပြဿနာ” - Room for the River – “The Problem with Levees” - Myanmar Water Portal
​(ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကို တားဆီးကာကွယ်ရာမှာ တာတွေဟာ အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တစ်မျိုးတည်း အပေါ်မှာ မှီခိုလွန်းနေတာက အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ခုကထဲက သိခဲ့ကြတဲ့အရာပါ။)
မစ္စစ်စီပီ၊ မစ်ဆိုရီ၊ အိုဟိုင်ယိုး၊ အီလီနွာနှင့် အခြား များစွာသော အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြစ်ကြီးများအားလုံး၏ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ကြုံခဲ့ကြရသည်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ အများစုကြား သမိုင်းဘာသာ ကျောင်းသင်ခန်းစာများအတွင်းနှင့် မိသားစုထမင်းဝိုင်းများအတွင်း ၁၉၂၇၊ ၁၉၃၇၊ ၁၉၉၃ နှင့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ရေကြီးရေလျှှံဖြစ်မှုကြီးများအကြောင်း အမှတ်တရ ရှိနေကြဆဲ ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြဆဲ ဖြစ်နေကြသေးသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ တာအများစုကို တူးဖောက်ကြည့်ပါက ရေကြီးရေကျော် ကြုံခဲ့ရတိုင်း အကြိမ်ကြိမ် မြှင့်တင်ထားခဲ့ကြသည်များကို၊ သစ်ပင်များ၏ ပင်စည်များအတွင်းမှ နှစ်ကွင်းများ ကဲ့သို့ပင်၊ အထပ်ထပ် တွေ့ရှိကြရမည် ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်းတွင်လည်း မြစ်ကြီးများ အများစုအတွင်း စံချိန်ကျိုးအောင်နှင့် စံချိန်ကျိုးလုနီးနီး ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့လာရသည်နှင့်အတူ ရှေ့တွင် မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြမည်ကို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ကြဖို့ လိုသည်။ အထူးသဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ရာစုနှစ်တစ်ခုလုံး နိုင်ငံအတွင်း ကြီးမားသည့် ဘေးဒုက္ခများနှင့် ကြုံတွေ့လာစေခဲ့သည့် မအောင်မြင်သည့် "တာတစ်မျိုးတည်း" အင်ဂျင်နီယာ နည်းဗျူဟာကိုသာ ဆက်လက်သုံးစွဲလာမည်ကို ဆန်းစစ်ဝေဖန်ကာ ဆန့်ကျင်ကြဖို့ လိုအပ်သည်။
သမိုင်းကို ငြင်းပယ်သူများသည် တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသည့် အမှားများကို ထပ်ခါတလဲ ပြန်လည်လုပ်ဆောင် တတ်ကြလေ့ရှိသည်။ ၁၈၄၉ ခုနှစ် နယူးအော်လန်း ပြည်နယ်အတွင်း ဘေးဒုက္ခများ ကျရောက်စေခဲ့သည့် မစ္စစ်စီပီမြစ် အောက်ပိုင်း ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများအပေါ် တစ်မျိုးသားလုံးက စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီး၊ နိုင်ငံအနောက်ပိုင်း မြစ်များတစ်လျှောက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က လေ့လာဆန်းစစ်မှု နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြုလုပ်စေခဲ့သည်။
နာမည်ကျော်ကြားလှသည့် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ချားလ်စ် အယ်လေ က မစ္စစ်စီပီနှင့် အိုဟိုင်ယိုး မြစ်များအတွက် ဆန်းစစ်ချက် တင်သွင်းရာတွင် ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် မိုးရေကို အလွှာများဖြင့် အထပ်ထပ် ထိန်းချုပ်စုပ်ယူ ထားနိုင်ရန်် တာများ၊ တမံများ၊ ရေစုရေလှောင်ကန်များ၊ ရေဖြတ်စီးရန် လမ်းကြောင်းများ၊ ရေထွက်ပေါက်များနှင့် ရေတိမ်ဒေသများကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့မှ အေ အေ ဟမ်းဖရီး ဦးဆောင်သည့် ဒုတိယအစုကမူ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ဖြစ်သည့် ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် တာတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ဇောက်ချ ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးရန် လိုသည်ဟု တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ရေဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်နေသည့် အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့၏ အခွင့်အာဏာနောက်ခံဖြင့် ဟမ်းဖရီး၏ "တာတစ်မျိုးတည်း" အယူအဆကသာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက် လွှမ်းမိုးနေခဲ့သည်။
မစ္စစ်စီပီမြစ် အောက်ပိုင်း ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ရေထွက်ပေါက်များ၊ ရေစုရေလှောင်ကန်များ၊ ရေဖြတ်စီးရန် လမ်းကြောင်းများ၊ မြစ်လက်တက်များကို လမ်းလွှဲပေးမှုများနှင့် တာများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း စသည့် အဆိုပြုနည်းလမ်းများစွာ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပြုချက်အားလုံးကိုလည်း အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့မှ အသေးစိတ် လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ တာစနစ်များမှလွဲ၍ အခြား အဆိုပြုချက်များ အားလုံးကို ဆောင်ရွက်ရန် မသင့်လျော်သဖြင့် ပယ်ချခဲ့ကာ၊ တာပတ်သည့်စနစ်သည်သာ မှန်ကန် သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်ဟု ဟမ်းဖရီးက ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉ ရာစုအဆုံးထိနှင့် ၂ဝ ရာစု ပထမဆယ်စုနှစ်များ အတွင်း အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့က အခြားဖြစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ရှောင်ရှားကာ၊ ရှိသမျှ အရင်းအမြစ်များနှင့် အရင်းအနှီးများကို တာများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်း၊ တာများကို မြစ်ကြောင်းများနှင့် နီးနိုင်သမျှနီးကပ်စွာ တည်ဆောက်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တာတစ်မျိုးတည်း အစီအစဉ်အောက်တွင် ရေစီးကို ထိန်းချုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်လာသည့် မြစ်ကြောင်းတည့်မတ်မှုများကြောင့် အဆိုးဆုံး ရေကြီးရေလျှံမှုများကိုပင် လုံခြုံဘေးကင်းစွာ လွှဲဖယ်သယ်ဆောင်သွားနိုင်စေလိမ့်မည်ဟူသည့် ယုံကြည်ချက်ဖြင့် သဘာဝမြစ်ကြောင်းများနှင့် ထွက်ပေါက်များကို တာများဖြင့် ဖြတ်ပိတ်ခြင်းမျိုး များလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
တာတစ်မျိုးတည်း အစီအစဉ်အပေါ် ယုံကြည်မှုများမှာ ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ရုတ်တရက် လမ်းဆုံးသွားခဲ့သည်။ ဇန္နဝါရီလအတွင်း မစ္စစ်စီပီမြစ်၏ အပိုင်းတချို့မှာ ရေကြီးရေလျှံအမှတ်များ၏ အပေါ်တွင် ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး၊ မစ်ဆိုရီမြစ်ဝှမ်းဒေသတွင် နှင်းများ အရည်ပျော်ခြင်းနှင့် နွေဦးနှင့် နွေရာသီကာလများအတွင်း မိုးကြီးမှုများနှင့် ထပ်မံ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရသည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့က တစ်လျှောက်လုံး ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည့် မစ္စစ်စီပီမြစ်သည် မမ်ဖိစ်တွင် တာများကျိုးကျမှုကြောင့် မက်ဆီကို ပင်လယ်ကွေ့အတွင်း ဧကသန်းပေါင်းများစွာ ရေလွှမ်းမိုးခံရပြီး လူ ၁,ဝဝဝ မှ ၃,ဝဝဝ သို့မဟုတ် ၃,ဝဝဝ ကျော်အကြားဖြစ်နိုင်သည့် အသက်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။
၁၉၂၇ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများ၏ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အကျိုးဆက်များက အမေရိကန်နိုင်ငံကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာစေခဲ့ပြီး၊ ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများကို ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အယူအဆတွင် နိုင်ငံ၏ ဦးတည်ရာကို ၁၈ဝ ဒီဂရီ ချိုးကွေ့စေခဲ့သည်။ မိုးရေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အတွက် တမံများတည်ဆောက်မှုကို စနစ်တကျ ငြင်းပယ်လာခဲ့ရာမှ အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့သည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်ခန့်အထိ အဓိကကျသည့် တမံပေါင်း ၂၂၂ ခုကို တည်ဆောက်လာခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်တွင် နိုင်ငံအနှံ့ တမံ ရဝဝ ခန့်ထိ ရှိလာခဲ့သည်။ မစ္စစ်စီပီမြစ် အတွက် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့က တာတစ်မျိုးတည်း အစီအစဉ်ကို ဂျက်ဒွင်စီမံချက်ဖြင့် အစားထိုးကာ မြစ်လက်တက်များပေါ်တွင် တမံများကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ရေဖြတ်စီးရန် လမ်းကြောင်းများနှင့် အခြားနည်းလမ်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကြောင့်၊ ၁၉၂၇ ခုနှစ်မှစကာ ၂ဝ၁၁ နှင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်များအတွင်း ဆိုးရွားလှသည့် အခြေအနေများအတွင်း အပါအဝင် မစ္စစ်စီပီမြစ် အောက်ပိုင်း လွင်ပြင်ဒေသကို ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများမှ ကျယ်ပြန့်စွာ အကာအကွယ် ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၂၇ ခုနှစ်မှစကာ ယနေ့အထိနှင့် မစ္စစ်စီပီမြစ် အောက်ပိုင်းမှ အမေရိကန် တစ်နိုင်ငံလုံးအထိ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ရေလျှံကွင်း စိုက်ပျိုးမြေများကို အကာအကွယ်ပေးရာတွင် တာများမှာ အဓိကနေရာမှ ဆက်လက် ပါဝင်လျက်ရှိနေသည်။ တမံများနှင့် ရေစီးဖြတ်လမ်းများက တာများကို အထောက်အကူပေးလျက် ရှိနေကြသည့်အပြင်၊ မြေပြင်တည်ဆောက်မှုမဟုတ်သည့် အမျိုးသားရေကြီးမှု အာမခံအစီအစဉ်ကဲ့သို့သော စီမံချက်များကလည်း ရေကြီးရေလျှံဖြစ်နို်င်သည့် မြေပြင်များပေါ်တွင် လူနေမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ကန့်သတ်ထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် မြစ်အတွက်နေရာပေးပါ အစီအစဉ် စတင်မှုအဖြစ် တာများကို မြစ်နှင့်ဝေးရာနေရာများတွင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အနီးဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သူများကို ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများမှ လုံခြုံမှုတိုးလာစေပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အပန်းဖြေမှုဆိုင်ရာ အကျိုးများကို ကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိလာစေသည်။ သို့ရာတွင် ……. ကောင်းကင်တွင် မိုးညို့လာပြီး၊ မြစ်ရေတက်လာသည်နှင့် ရေလျှံကွင်းတွင် နေထိုင်သူများနှင့် ယင်းတို့၏ နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်များက တောင်းဆိုလာလေ့ ရှိသည်မှာ တာများကို များများနှင့် ကြီးကြီး လုပ်ပေးရန်ဟူ၍သာ ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၂ဝဝရ ခုနှစ် ကျယ်ပြန့်သည့် ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများအပြီး၊ အီလီနွာမြစ်နှင့် မစ္စစ်စီပီမြစ်အထက်ပိုင်း တစ်လျှောက် စိုက်ပျိုးမြေများကို လာမည့်နှစ် ၅ဝဝ အထိ လုံခြံူမှုရှိလာစေရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယန် ကုန်ကျမည့် တာများ တည်ဆောက်ရန် မစ္စစ်စီပီမြစ်အထက်ပိုင်း ဘက်စုံစီမံချက်ကို အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့က ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကုန်ကျမည့်တန်ဖိုး မြင့်မားလွန်းခြင်းနှင့် တစ်ဒေါ်လာ ရင်းနှီးတိုင်း တရားဝင် ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် အကျိုးဖြစ်မှုအချိုး ဝ.ဝ၅ မှ ၅ ဆင့်သာ ရှိသော်လည်း၊ ယင်းစီမံချက်ကို အင်ဂျင်နီယာ တပ်ဖွဲ့၏ မစ္စစစ်စီပီမြစ်ဝှမ်းကော်မရှင်နှင့် ပြည်နယ်သုံးခုမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများက ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ယင်းစီမံချက်အတွက် လွှတ်တော်က ငွေကြေးခွင့်ပြုမှုများ မရှိခဲ့သော်လည်း၊ စီမံချက်ကို ထောက်ခံသူများက ယနေ့တိုင် ဆက်လက် တောင်းဆိုစည်းရုံးလျက် ရှိနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွက် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများမှာ စောစီးစွာ စတင်ခဲ့ပြီး၊ မစ်ဆိုရီမြစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မြစ်လက်တက်များတွင် ရေမှတ်များမှာ မတ်လအတွင်းက စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများအတွင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှာ မြစ်အများစုနှင့် ဗဟိုနှင့် တောင်ပိုင်းဗဟိုဒေသများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ပျက်စီးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို မသိရှိရသေးသော်လည်း မြစ်ဆုံနှင့် အိုမာဟာဒေသ အကြား မစ်ဆိုရီမြစ်အတွင်း တာပေါင်း ၁၆ဝ ကျိုးပေါက်မှုများကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ပင် ဒေါ်လာ ၁.၉ ဘီလီယန် လိုအပ်မည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တွင်လည်း ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်အတွက် ကြီးမားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ရေအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကို ရေးဆွဲနိုင်ရန်၊ ရေကြီးရေလျှံမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အကြီးစားတည်ဆောက်မှုများနှင့် စီမံကိန်းများကို ဆွေးနွေးလျက် ရှိနေကြသည်။ ယင်းမှာ အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့၏ မြို့ပြနှင့် အရေးပေါ် လုပ်ငန်းများအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှုးချုပ် မိုက်ကယ်ဝဲ့လ်ချ် ပြောသကဲ့သို့ပင် ကောင်းမွန်သည့် အရေးပေါ်အခြေအနေကို လုံးဝလက်မလွှတ်ရန်မျိုး ဖြစ်နေသည်။
တာများမှာ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပြီးတိုင်း အလိုအလျောက် တောင်းဆိုကြသည့် အရာမျိုးဖြစ်နေသည်။ ဒေသတွင်း နေထိုင်သူများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများက ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများကို အပြီးတိုင်အလုံးစုံ တားဆီးပေးနိုင်မည့် ဖျက်ဆီးမရနိုင်သည့် အတားအဆီးများကို တွေးမြင်ကြည့်လေ့ ရှိကြသည်။ ပြည်ထောင်စု အရေးပေါ်အခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲရေး အေဂျင်စီကလည်း တာများ၏နောက်တွင်ရှိနေသည့် မြေပြင်ကို နောက်ထပ် အနည်းဆုံး နှစ် ၁ဝဝ တိုင် ရေလျှံကွင်း ဖြစ်မလာစေရန်အတွက်၊ အမေရိကန် ရေကြီးရေလျှံမြေပုံကို ယင်းပုံစံအတိုင်း အတိအကျ ဖြစ်စေရန် မျက်လှည့်ပြသကဲ့သို့၊ ရေးဆွဲနေသည်။ လက်တွေ့တွင် တာများက ယင်းတို့ကာကွယ်ထားသည့် အကျယ်အဝန်းအတွင်း အမြဲလိုလို ရေကြီးရေလျှံဖြစ်နိုင်သည့် လက်ကျန်အန္တရာယ်ကို ထားခဲ့လေ့ ရှိသည့်အတွက်၊ ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ် လုံးဝမရှိနိုင်ဟု ယုံကြည်ကာ ရေလျှံကွင်းများအတွင်း နေထိုင်သူများအနေဖြင့် ညမအိပ်သင့်ကြပေ။
ထို့အပြင် မြစ်တစ်ဘက်ရှိ ရေလျှံကွင်းတစ်ခု၏ အပိုင်းတစ်ခုကို ရေမလျှံစေရန်အတွက် တာများက အကာအကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်၊ မြစ်၏အခြားဘက်ကမ်း သို့မဟုတ် မြစ်ညာဘက်နှင့် မြစ်အောက်ဘက်ရှိ နီးစပ်ရာမြေပြင်သို့ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို အတိုင်းအဆ တစ်ခုအထိ လွှဲပြောင်းပေးလေ့ ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁ရဝ က ချားလ်စ်အယ်လေ ဆိုခဲ့သလိုပင် အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း များမှ ကာကွယ်ရာတွင် တာများမှာ လုပ်ငန်း၏ အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ယင်းတို့ကို ကျယ်ပြန့်သည် ့ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှု ကာကွယ်ရေး နည်းဗျူဟာ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချရန်ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများမှ ပြင်ဆင်မှုများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးကို အလုံးအရင်းဖြင့် တာတစ်မျိုးတည်း နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်လား သို့မဟုတ် ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အမြော်အမြင်နှင့် အကျိုးရှိစွာ အဆင့်ဆင့် သတိထားလျက် သုံးစွဲမည်လားဆိုသည့် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။ လက်ရှိ ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများအပြီး တာများပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေက ယနေ့အထိ အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများ အားလုံးအတွက် ရက်ရောလှသည့် ငွေကြေးခွဲဝေမှုကို ခွင့်ပြုထားသည်။ မကြာခဏ ကျိုးပေါက်ခဲ့သည့် တာများကိုလည်း ယခင်က ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် အကြိမ်ရေ သို့မဟုတ် ကုန်ကျခဲ့သည့် အခွန်ငွေ စသည်များကို ဆန်းစစ်မှု မရှိဘဲ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ပေါ့ပေးရန်အတွက် စဉ်းစားနေသည်ဟု ဆိုကြသဖြင့် တာများကို စီမံခန့်ခွဲနေကြသူများအနေဖြင့် မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရန် အချက်များကို ပျက်ကွက်နေကြသော်လည်း ပြင်ဆင်စရိတ်များကို ရနိုင်ခြေ ရှိနေသည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်နှင့် အနာဂါတ် ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်မှုများအတွက် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့နှင့် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တို့သည် ပြည်ထောင်စု အရေးပေါ်အခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲရေး အေဂျင်စီမှ သင်ခန်းစာများကို ရယူသင့်ကြသည်။ အမျိုးသား ရေကြီးမှုအာမခံ အစီအစဉ်သည််လည်း အချိန်နှင့်အမျှ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြင်ဆင်ခဲ့ရသည့် အမေရိကန် ရေလျှံကွင်းများပေါ်မှ ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ပြင်ဆင်စရိတ်များ လျော့နည်းလာစေရေး ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်သည်ဆိုသည့် သင်ခန်းစာကို ခက်ခဲလှသည့် အတွေ့အကြုံများကြားမှ ရယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။
တာများအတွက် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြင်ဆင်စရိတ်များကို လက်ခံရရှိသူများအနေဖြင့်လည်း တာများကို နောက်ဆုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိ ရန်ပုံငွေချထားရေး ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုမထားသေးသည့် မြေယာဝယ်ယူခြင်း စသည့် အလားတူ အခြားနည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်စဉ်းစားရန် လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်လာနိုင်သည်။ ပိုမိုစနစ်တကျဖြစ်လာစေရန်အတွက် ဒေသဆိုင်ရာ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အမေရိကန် အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးအတွက် တာများနောက်တွင် နေထိုင်ခြင်းအတွက် လက်ကျန်အန္တရာယ်ရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းအသစ်များကို အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများ မကြုံရနိုင်သည့် နေရာဒေသများဆီသို့ လမ်းကြောင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။
တစ်ခါက သတင်းထောက်တစ်ယောက်၏ တာများကို ဘာ့ကြောင့်မုန်းတီးပါသနည်း ဟူသည့် အမေးအတွက် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှု အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် သုံးစွဲရမည့် နည်းလမ်းများစွာအနက် တာများသည်လည်း တန်ဖိုးရှိသည့် နည်းလမ်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့် တာတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးပြုခြင်းသည် မှားယွင်းသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ဘဲ လွန်ခဲ့သည့် ရာစုနှစ် တစ်ခုမျှလောက်ကပင် အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် နားလည်ထားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့မိသည်။
ယနေ့ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်နှင့် အနာဂါတ်တွင် ကြုံလာရမည့် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုများအတွက် ဖြစ်သင့်သည်ထက် ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသာ ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည့် နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်ထုတ်ရန် ကြိုးစားမှုများကို ဆန့်ကျင်ရန်နှင့် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်မှုအန္တရာယ်များကို မည်ကဲ့သို့ အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်စီမံနိုင်သည်ဆိုသည့် ခက်ခဲစွာရရှိထားသည့် သင်ခန်းစာများကို အသုံးချရန် လိုအပ်ပါသည်။
သိန်းမော် (သြဂုတ်လ ၃ ရက်၊ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်)
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ် သိပ္ပံနည်းကျ အမေရိကန် စာစုများမှ နီကိုလာ့စ် ပင်တာ ရေးသားသည့် "တာတွေရဲ့ ပြဿနာ" ဆောင်းပါးကို ပြန်ဆိုပါသည်။
Translation of an article posted on August 1, 2019 on the Scientific American blog "The Problem with Levees" written by Nicholas Pinter.
Details Scarce on Funding, Planning for Flood Prev...
Waste Water Flooding Integrated Water Resources Management Urban Development Climate Change Ecosystem Services Drinking Water Dams & Bridges Water Quality Groundwater